हामीले नगरे कसले गर्ने संस्थाको साधारणसभा – .:: Welcome to Saurahaonline.com |
हामीले नगरे कसले गर्ने संस्थाको साधारणसभा
२६ आश्विन २०७४, बिहीबार १८:१२
चितवन, २६ असोज । सामाजिक संस्था हामीले नगरे कसले गर्ने ? चितवनको तेस्रो वार्षिक साधारणसभा बिहीबार भरतपुरमा सम्पन्न भएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष विनोदबाबु रिजालको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति, आर्थिक तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
साथै साधारणसभाले संस्थालाई सामाजिक सेवामा थप क्रियाशील बनाउने गरी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको सचिव अनिल ढकालले जानकारी दिए । संस्थाले आगामी वर्ष विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, बृहत स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्नेलगायत निर्णय पनि गरेको छ ।
२०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछि स्थापना भएको संस्थाले सुरुआतमा ४ जिल्लामा राहत संकलन तथा वितरण कार्यक्रम गरेको थियो भने चितवनको विकट स्यामराङ लोथरमा विद्यालय भवन बनाएको छ । साथै विपन्न विद्यार्थीलाई पढ्न सहयोग पनि गरिरहेको छ ।